lundi, 30 septembre 2019 16:26
Kandida Nantenaina: Tonga dia « action » ny fanombohany ny « pré-campagne »
Feno ny programan’i Nantenaina, kandidan’ny IRD, mitondra ny laharana voalohany (01) amin'ny bileta tokana eto Toamasina I, amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna, tamin’ity herinandro ity, ary nisandrahaka sy nahasahana sehatra maro izany. Nanome rà niaraka tamin’ny ekipany ; nanolotra fanomezana ireo mpianatra mendrika. Nitsidika toerana maromaro, nifanantona tamina vondron’olona sy fikambanana maro, nihaona tamina sokajin-taona sy sokajin’asa maro. Nitsidika fiangonana. Nampanao « cours gratuit » ho an’ny mpianatra hanala fanadinana bakalôrea. Tonga dia « action » ny fanombohan’i Nantenaina ny «pré-campagne». (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 27 septembre 2019 21:54
Irlandy: Maniry hanatsara ny fifandraisana ara-diplaomatika amin’i Madagasikara
Nihaona tamin’ny Praiminisitra malagasy Ntsay Christian, tao New York, ny Filoham-pirenenan’i Irlandy, Michael D. Higgins. Maniry ny hanatsara ny fifandraisana ara-diplaomatika amin’i Madagasikara io firenena io, ary nomarihin’ny Praiminisitra fa ny masoivohon’i Irlandy ao Mozambika no miandraikitra ny fifandraisana amin’i Madagasikara amin’izao fotoana izao. Nojerena ny sehatra azo iaraha-miasa ka anisan’izany ny fampianarana sy ny fanofanana ara-teknika, ary ny fizahantany. Hirotsaka hofidiana ho mpikambana amin’ny Sampana miandraikitra ny fandriampahalemana eo anivon’ny Firenena Mikambana amin’ny 2020 ihany koa i Irlandy ka nangataka ny fanohanan’i Madagasikara. (Jereo Sary Tohiny)
Antenimierandoholona: Senatera efatra no nandao an’Anosikely, efa voasolo ny roa
Tato anatin’ny telo volana izao dia Senatera miisa efatra no niala tao amin’ny Antenimierandoholona. Voafidy ho solombavam-bahoaka ny telo amin’ireo, ary voatendry ho Governora kosa ny fahaefatra. Efa voasolo ny toeran’ireo Senatera roa voafidy ho solombavam-bahoaka tamin’ny fifidianana notanterahina ny 27 may 2019, araka ny didy navoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana. Randriamananjara Philibert no Senatera avy amin’ny « MIFANASOA » Toamasina misolo toerana an-dRamarosoa Emeline, izay voafidy ho depiote ao Amparafaravola. Randriamanantena Vévé, no Senatera avy amin’ny « MAPAR » Mahajanga misolo toerana an’i Velontsara Paul Bert, ity farany izay voafidy tao Port Berger.
jeudi, 26 septembre 2019 09:11
Faritra: "Governora" no hiantsoana ny Lehiben'ny faritra
Manomboka izao, araka ny volavolan-kevitra naroson’ny Minisitry ny Ati-tany sy ny fitsinjiram-pahefana nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 25 septambra 2019, nandaniana ny didim-panjakana mametra sy mandamina ny anjara andraikitry ny Governoran’ny faritra dia "Governora" no hiantsoana ny Lehiben'ny faritra. Ny "Governora" no hiantsoroka ny fahefana mpanatanteraka any amin'ny faritra ; izy no hiandraikitra ny asa fampandrosoana isam-paritra. Homena 1 miliara Ariary isam-paritra hanaovany asa maika tahaka ny lalana rary vato, ny tsena, sy ny fotodrafitr’asa tena ilain'ny mponina andavanandro, ao anatin'ny telo volana.
mercredi, 25 septembre 2019 21:23
Governora: Voatendry ny 11, miandry ny ambiny
Notendrena nandritra ny filankevitry ny minisitra androany ny Governora. Miisa 11 izy ireo no voatendry, miandry fanendrena amin’ny fotoana maraka ny sasany. Misy efa lehiben'ny Faritra teo aloha, misy efa solombavam-bahoaka teo aloha, misy Senatera amperin'asa amin'ireo voatendry.
mercredi, 25 septembre 2019 18:39
Fifidianana mpanolotsaina: Kaominina miisa 8 tsy manana kandida
4 960 ireo filatsahan-kofidiana mpanolotsaina voaray teny anivon’ireo OVEC manerana ny Nosy. Nolavina ny 58 tamin’ireo ; miisa 4 902 ny filatsahan-kofidiana nekena. Miisa 8 ireo Kaominina izay tsy manana kandida, dia ny Kaominina Mahabe, Distrika Besalampy. Amparihintsokatra sy Antsangasanga ao amin’ny Distrika Ambatondrazaka. Ambatofisaka II, Ambodinonoka, Andonabe Sud, Lohavanana ary Sahakevo ao amin’ny Distrika Marolambo. Miisa 148 ireo Kaominina ahitana kandida tokana amin’ny fifidianana mpanolotsaina.
mercredi, 25 septembre 2019 11:17
Fivoriamben’ny Firenena Mikambana: Amin’ny sabotsy 28 septambra ny anjara fitenenan’i Madagasikara
Mitohy anio ny fivoriambe faha-74 ny Firenena Mikambana, rehefa nisokatra ofisialy omaly. Hanana anjara fitenenana i Madagasikara. Teo amboalohany dia tokony amin’ity anio ity ny anjara fotoana, raha ny tapaka farany tamin’ny zoma anefa dia mihemotra ho amin’ny sabotsy 28 septambra 2019 ny fandraisam-pitenenan’i Madagasikara. Ntsay Christian, praiminisitra lehiben’ny governemanta, sady minisitry ny raharaham-bahiny, no mitarika ny delegasiona malagasy miatrika ity fivoriamben’ny Firenena Mikambana any New York, Etazonia ity. Resahina betsaka mandritra izany ny ady amin’ny fahantrana, ny kalitaon’ny fanabeazana, ny amin’ny fiovaovan’ny toetrandro sy ny tsy fandraisan’andraikitra. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 24 septembre 2019 18:48
Toamasina: Hafa kely ny ankitsapaka omaly
Tontosa omaly alatsinainy 23 septambra 2019 ny ankitsapaka nandaharana ao anaty biletà tokana ireo kandida Ben’ny tanàna sy mpanolontsain’ny tanàna eto amin’ny Kaominina ambonivohitr’i Toamasina. Efatra ireo kandida Ben’ny tanàna, telo kosa ireo lisitra hifaninana amin’ny toeran’ny mpanolontsaina. Hafa kely ny vokatry ny ankitsapaka, satria dia nitovy ny laharan’ny kandida Ben’ny tanàna sy ny lisitra mpanolontsaina miaraka aminy voasarika nandritra io ankitsapaka io. Voasarika hitondra ny laharana voalohany ao amin’ny biletà tokana ho an’ireo kandida Ben'ny tanàna ity i Nantenaina, kandidan’ny IRD. Mbola laharana voalohany ihany koa ny lisitra mpanolontsaina miaradia aminy.
mardi, 24 septembre 2019 18:47
Kaominina Ambohimasina: Hifampitana ny IRD sy Freedom ary MMM
Any Antananarivo no mifanaraka fa aty Ambohimasina dia samy mandeha samy mitady ny IRD sy Freedom ary MMM amin’ny fifidianana ho mpanolontsain’ny tanàna hatao amin’ny 27 novambra 2019. Kaominina ambanivohitra ao amin’ny Distrika Arivonimamo i Ambohimasina. Enina ny lisitra mpanolontsaina mifaninana eto Ambohimasina. Samy nandrotsaka lisitra ny IRD (Isika rehetra miaraka @ Andry Rajoelina) sy Freedom ary MMM (Malagasy Miara Miainga) miampy ny an’ny Tiako i Madagasikara sy lisitra tsy miankina roa. Voalaza fa tsy nifanaraka ny IRD sy Freedom ka mifaninana ao amin'io Kaominina io.
mardi, 24 septembre 2019 11:17
Fivoriamben’ny Firenena Mikambana: Ny Praiminisitra no mitarika ny delegasiona malagasy
Misokatra ofisialy anio 24 septambra any New York, hitohy rahampitso ny Fivoriambe faha-74 ny Firenena Mikambana. Ilay teratany nizeriana Tijjani Muhammad-Bande, no filoha mitarika ity fivoriambe faha- 74 ity. Ntsay Christian, praiminisitra lehiben’ny governemanta, sady minisitry ny raharaham-bahiny, no mitarika ny delegasiona malagasy miatrika ny fivoriambe any an-toerana. Ny alahady 22 septambra teo izy no niala teto an-toerana.